တရုတ် food-delivery app Ele.me ကို Alibaba ဝယ်ယူ – Internet Journal |
တရုတ် food-delivery app Ele.me ကို Alibaba ဝယ်ယူ
Apr 02, 2018Comments Off on တရုတ် food-delivery app Ele.me ကို Alibaba ဝယ်ယူ1312
တရုတ် e-commerce ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Alibaba ဟာ ဒေါ်လာ ၉.၅ ဘီလျံတန်ကြေးရှိတဲ့ food-delivery startup Ele.me ကို ဝယ်ယူလိုက်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဝယ်ယူတဲ့ ငွေပမာဏကိုတော့ မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ Ele.me ရဲ့ လက်ရှိတန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၉.၅ ဘီလျံဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ ဒေါ်လာ ၅.၅ ဘီလျံကနေ မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ Alibaba က ဆိုပါတယ်။
အပြာနဲ့ အဖြူရောင်စပ်ထားတဲ့ Ele.me ရဲ့ လျှပ်စစ်စကူတာတွေဟာ KFC နဲ့ Starbucks တို့အပါအဝင် စတိုး ၁. ၃ သန်းဆီကနေ အော်ဒါပေါင်း ၄.၅ သန်းကို နေ့စဉ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ ဒီ app ကို သုံးစွဲသူအရေအတွက် သန်း ၂၆၀ ရှိပါတယ်။
ဒီဝယ်ယူမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက Alibaba နဲ့ Ele.me တို့ဟာ အနီးကပ် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး Alibaba ရဲ့ဌာနခွဲဖြစ်တဲ့ Alipay mobile wallet app ကိုသုံးကာ startup ကနေ အစားအသောက်တွေကို မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Alipay mobile wallet ကိုသုံးစွဲသူ သန်း ၄၅၀ ရှိပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အစားအသောက်ပေးပို့တဲ့ဈေးကွက်ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ တန်ကြေး ဒေါ်လာ ၃၁.၉ ဘီလျံရှိခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကထက် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရုတျ food-delivery app Ele.me ကို Alibaba ဝယျယူ
တရုတျ e-commerce ကုမ်ပဏီကွီးဖွဈတဲ့ Alibaba ဟာ ဒျေါလာ ၉.၅ ဘီလြံတနျကွေးရှိတဲ့ food-delivery startup Ele.me ကို ဝယျယူလိုကျတယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
ဝယျယူတဲ့ ငှပေမာဏကိုတော့ မဖျောပွခဲ့ပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ Ele.me ရဲ့ လကျရှိတနျဖိုးက ဒျေါလာ ၉.၅ ဘီလြံဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈရဲ့ ဒျေါလာ ၅.၅ ဘီလြံကနေ မွငျ့တကျလာခဲ့တယျလို့ Alibaba က ဆိုပါတယျ။
အပွာနဲ့ အဖွူရောငျစပျထားတဲ့ Ele.me ရဲ့ လြှပျစဈစကူတာတှဟော KFC နဲ့ Starbucks တို့အပါအဝငျ စတိုး ၁. ၃ သနျးဆီကနေ အျောဒါပေါငျး ၄.၅ သနျးကို နစေ့ဉျ ဝနျဆောငျမှုပေးနပေါတယျ။ ဒီ app ကို သုံးစှဲသူအရအေတှကျ သနျး ၂၆၀ ရှိပါတယျ။
ဒီဝယျယူမှုမတိုငျခငျကတညျးက Alibaba နဲ့ Ele.me တို့ဟာ အနီးကပျ လကျတှဲလုပျကိုငျခဲ့ကွပွီး Alibaba ရဲ့ဌာနခှဲဖွဈတဲ့ Alipay mobile wallet app ကိုသုံးကာ startup ကနေ အစားအသောကျတှကေို မှာယူနိုငျပါတယျ။ Alipay mobile wallet ကိုသုံးစှဲသူ သနျး ၄၅၀ ရှိပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံရဲ့ အစားအသောကျပေးပို့တဲ့စြေးကှကျဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ တနျကွေး ဒျေါလာ ၃၁.၉ ဘီလြံရှိခဲ့ပွီး လှနျခဲ့တဲ့တဈနှဈကထကျ ၂၃ ရာခိုငျနှုနျး မွငျ့တကျလာခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
Previous PostSocial Media သုံးစွဲနေမှုနဲ့ အချက်အလက် လုံခြုံရေးအပေါ် သူတို့အမြင်
Next Postဖွံ့ဖြိုးဆဲဈေးကွက်များအတွက် mid-range PIxel ဖုန်းတစ်မျိုး Google ဖန်တီးနေဟုဆို